Izintombi nto ezinelungelo lokuveza umzimba | News24
Izintombi nto ezinelungelo lokuveza umzimba
PHOTO: facebookUNonhlanhla Qwabe owasusa umsindo ezinkundleni zokuxhumana ngengubo ayeyigqoke emcimbini wama Metro FM Awards ngenyanga edlule.
OSEKHALENI lempi yokuvikela amasiko kanjalo namagugu esintu uSolwazi Nomagugu Ngobese ukhuza ukumataniswa komkhuba wabesifazane abaveza imizimba yabo esidlangalaleni nesiko.
Ekhuluma ohlelweni lwantambama olushayelwa uSelby Mkhize no Tshatha Ngobe iWoza Nabangani Bakho uNgobese uthe abantu abamusa ukuqhathanisa lomkhuba wokuhamba nqunu kwabantu besifazane nezintombi ezihlolwayo ezisuke zihamba ngamabele okanye zigqoke ubuhlalu obufishane.
UNgobese uphawule kanje ngesikhathi kukhulunywa ngodaba lomculi wakuleli uNonhlanhla Qwabe obe ngundabuzekwayo emcimbini wamaMetro FM kanye nasezinkundleni zokuxhumana ngengubo abeyigqokile ebiveza ingxenye yomzimba wakhe.
“Isiko aliphelelwa isikhathi, umkhuba ophelelwa isikhathi. Izintombi ezingakaze zibe nangane ezingakaze zoniwe muntu zihamba ngomzimba ngokwesiko lethu lesintu ngoba zisuke zivunwa isikhathi sokuthi azikaze zithintwe, zihlanzekile. Kodwa uma sibheka indlela okugqokwa ngayo namhlanje sekunokubukisa ngokomzimba okunganambithisiseki futhi okungahlangene nesiko.”
UNgobese uthe ukungagqoki kwabesifazane kungafaniswa ne-pornography edayiselwa noma ngubani.
“Zikhona izitolo zabantu abadala zezinto zezocansi, laba abadayisa umzimba phambi kwethu baveze izinqa zabo abanalo igunya, sebaphelelwa isikhathi ngoba abazona izintombi. Kwelinye iphephandaba ngifundile ukuthi kukhona nengane yakhe lona wesifazane esingazike ukuthi uyikhulisa ngayiphi indlela njengoba egqoka kanje esidlangalaleni. Uma sikhuluma ngezigaba zomuntu, uma usungumama awunawo umzimba ongawuvezela umhlaba wonke,”kusho uNgobese.
Eqhuba uthe umuntu uma ezibuka esibukweni enqunu yena yedwa unelungelo kodwa uma esezovezela ubunqunu bakhe umphakathi wonke jikelele akuvumelekile.
“Asikufuni ukuthi uma umuntu esenza izinto zakhe bese ezihlanganisa namantombazane ethu ngoba intombi ibonwa ngebele, isinqa nethanga layo okungakaze kuthintwe umuntu.”
UNgobese uthe ngisho endulo kwakunomehluko wendlela intombi nto nentombi eseyonakele ababegqoka ngayo.
“Uma sibheka umuntu otholele umntwana ekhaya ngisho esintwini wayengenaso ngisho isithebe lokho kwakungenziwa ngoba ayebandlululwa kodwa kwakwenzelwa ukuthi kuze kube lomuntu omonile uyamshada bese engena kahle ke kumakhosikazi.”
UNgobese uthe inkinga enkulu ebhekene nentsha yakuleli ukuthi ithatha imikhuba eyenziwa osaziwayo baphesheya kwezilwandle.
“Noma ngabe sekuthiwa usuhlangene nezizwe kodwa kufanele uziqhayise ngesiko lakho kubonakale ukuthi uvelaphi. Intsha isenkingeni yokuthi kufanele ifundiswe ukuthi ngala kwelengabadi ukuze ube umuntu owamukelekile kufanele ugqoke kanjani hhayi ngoba sibalekela isitayela kodwa ngoba thina singama Afrika. Kukhona lobuntu bethu obuhambisana ngendlela esigqoka ngayo nangendlela esiphila ngayo okudingeka ekugcineni kube nemfundiso ende ukuze sonke sikuqonde lokhu. Umabonakude iwona owenza abantwana bethu bathathe izinto ezenziwa ngezinye izizwe.”